gmail ကိုဟက်လို့ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား — MYSTERY ZILLION
gmail ကိုဟက်လို့ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား
gmail ကို ဟက်လို့ရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်.. အဲဒါဟုတ်ပါသလား.. တကယ်လို့ ဟက်လို့ရတယ်ဆိုရင်... ဘယ်လိုမျိုး ဟက်နိုင်ပါသလဲ.. အဲလိုဟက်တာမခံရအောင်ရော ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါသလဲဗျာ..
satepotegyi wrote: »
သူဆိုလိုတာက အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လောက်ဘူးဗျ တစ်ယောက်ယောက်ကိုဖြေစေချင်တာဗျ
ဖြစ်နိူင်ပါတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အစ်ကိုဟက်တတ်ရင်ဟတ်ပါလို့ Goolge ကတရား၀င်စိန်ခေါ်ထားပါတယ် သူ site သူ products တွေကို ဟတ်လို့ရရင်ဟတ်ပါတဲ့ခင်ဗျာ
အဖြူရောင်ဟက်ကာ (White-Hacker) တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဟတ်လို့ရနိူင်ပါတယ်
သာမန်ယူဆာ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ဟတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိူင်ပါဘူး
ခုအဟတ်ခံနေရတယ်ဘာညာဆိုတာ ကိုပိန်းလို့ခံရတာဘာ မန်တလေးကလူတစ်ယောက်ကို ရန်ကုန်ကနေဟတ်လို့မဖြစ်နိူင်ပါဘူး ရန်ကုန်ကလူတစ်ယောက်ကိုလည်း မန်းတလေးကလူတစ်ယောက်ကဟတ်ဖို့မဖြစ်နိူင်ပါဘူး အစ်ကို ကွှျန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပါတယ်နော် . . .
Mg-STERY wrote: »
မန်တလေးကလူတစ်ယောက်ကို ရန်ကုန်ကနေဟတ်လို့မဖြစ်နိူင်ပါဘူး ရန်ကုန်ကလူတစ်ယောက်ကိုလည်း မန်းတလေးကလူတစ်ယောက်ကဟတ်ဖို့မဖြစ်နိူင်ပါဘူး အစ်ကို ကွှျန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပါတယ်နော် . . .
သေချာဘီလား....... ဟွင်းဟွင်း....... ကျွန်တော့ ဦးလေး ရန်ကုန်သားက မန်း က အန်တီလေးကို ဟက်ထားတာ........ ခုဆို ညီကိုတွေ တောင် ၃ ယောက်ရှိနေဘီ.......... ဟီးဟီး...... စတာနော်...... စိတ်ဆိုးနဲ့......
ဟား တူတူပဲ တူတူပဲ နာက နာ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲက ဟက်ထားတာ အခုတော့ နာက ဦးရေး အခေါ်ခံနေရပြီ။
thar5oe wrote: »
အဲဒါ ဟတ်တာဟုတ်ဘူးဟဲ့ ... warm .. ထည့်ထားတာ .. (ဒါလေးတောင်မသိဘူးလား .. :D)
ရပါတယ်။ ၄၈ နာရီတိတိ အချိန်ယူလိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟက်တာမဟုတ်ဘူးနော်၊ Google Server ဆီကနေပဲ ပြန်တောင်းတာ။ တစ်ခုတော့လိုတယ်။ သိပ်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ (7) ရက်သက်တမ်းရှိတဲ့ G-mail အကောင့် တစ်ခု။
ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ mail account ကလွဲရင် အကုန် ယူလို့ရတယ်။
crossfireghost wrote: »
ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစ်ကို အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် ဒါနဲ့ အကိုပြောတာ က ဒီလင့်ခ် လေးသုံးပြီး ပြန်တောင်းတာလား
၀င်မရေးတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ ။ ၀င်ဖောမယ်နော်် ):)):))
http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=4637 အဲဒီမှာ ကိုbrb ရေးထားတာပါ။အဲဒါက fack login (phishing attack) ပါ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုbrb
gmail hack လို့ရလားမေးတဲ့ post တွေတော်တော်များလာတာတွေ့တာပါတယ်။ ခုလည်းဒီမှာမေးပြန်ပြီ။ အမေးရှိရင်တော့ အဖြေရှိရမှာပေါ့။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ဘူး။ ကိုလူနောက် တို့ ကို ဘီအာဘီ တို့ရှိတယ် ။ မ လိုက်ပါတယ် ):))
အဲဒီမှာလည်းသွားကြည့်လိုက်ဦး ကို ဘီအာဘီ သေချာရှင်းထားပါတယ်။ \_:D/\_:D/\_:D/